'नालापानी’ को टिजर सार्वजनिक (भिडियो) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
‘नालापानी’ को टिजर सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौं । चलचित्र ‘नालापानी’ को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालीहरुको विरताको इतिहास ‘नालापानी’को युद्धको कथामा बनेको चलचित्रको टिजर बिहिबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बिच सार्वजनिक गरिएको हो । पद्मा कुमारी फिल्मस प्रा.ली. र गंगानारायण फिल्मस प्रालीको संयुक्त ब्यानरमा बनेको यस चलचित्र रिमेश अधिकारीले निर्देशन गरेका हुन् भने निर्माता मनोज शाक्य हुन् ।
चलचित्रमा विपिन मल्लको सम्पादन, बसन्त घर्तीमगर र अच्यूत गजुरेलको भीएफएक्स, कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी, रोशन श्रेष्ठको एक्सन छ । रिमेश अधिकारी र कृष्ण आचार्यले यो चलचित्रको स्क्रीप्ट तयार पारेका हुन् । चलचित्रमा अर्जुनजंग शाही, सन्तोष पन्त, देशभक्त खनाल, पूजना प्रधान, मनोज शाक्य लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।
चलचित्रको प्रदर्शन मिति तय गरिएको छैन । सन् १८१४ मा देहरादुनस्थित नालापानी गढीमा भएको अङ्ग्रेज–नेपाल युद्धमा नेपाली फौजका तर्फबाट कप्तानी गरेका वीर बलभद्र कुँवरले लडेको ऐतिहासिक लडाईंलाई आधार बनाएर यो फिल्म निर्माण भएको जनाईएको छ ।
कमेडियन कपिल शर्मा विवाह बन्धनमा बाँधिँदै, को हुन् दुलही ?
एजेन्सी । भारतीय हास्य कलाकार कपिल शर्मा विवाह बन्धनमा बाधिने भएका छन्। शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत […]
काठमाडौं । चीनको सान्या सहरमा चलिरहेको मिस वर्ल्ड–२०१८ को विभिन्न चरणका प्रतिस्पर्धामा मिस नेपाल–२०१८ शृंखला […]